Eyona Urolithin A powder (1143-70-0) -Umenzi kunye nomzi mveliso
ICofttek yeyona ilungileyo Urolithin Umenzi womgubo eTshayina. Umzi-mveliso wethu unenkqubo epheleleyo yolawulo lwemveliso (i-ISO9001 kunye ne-ISO14001), kunye namandla emveliso yenyanga engama-400kg.
Ukucaciswa komgubo we-Urolithin A
igama: Urolithin A.
Igama leKhemikhali: I-3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-inye
Ifomula Yemichiza: C13H8O4
Isisindo somzimba: 228.2
umbala: Umhlophe ukuya kumhlophe-omsundu omsulwa
Isitshixo se-InChi: I-RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Ikhowudi ye-SMILES: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
umsebenzi: I-Urolithin A, i-gut-microbial metabolite ye-ellagic acid, ikhupha izinto ezinxamnye nokuvuvukala, antiproliferative, kunye nepropathi ye-antioxidant. I-Urolithin A yenza i-autophagy kunye ne-apoptosis, icinezele ukuqhubela phambili komjikelezo weseli, kwaye ithintele ukwenziwa kweDNA.
isicelo: I-Urolithin A yintsholongwane ye-ellagitannin; Ii-Intermediates zamayeza
Umzimba: I-soluble kwi-DMSO (3 mg / mL).
Isitoreji sokugcina: Okomileyo, omnyama kunye no-0 ukuya ku-4 C okwexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -20 C ixesha elide (iinyanga ukuya kwiminyaka).
Urolithin A. Spectrum yeNMR
(1) Inokwandisa ixesha lokuphila
I-Urolithin A induces mitophagy ngokukhetha ngokususa i-mitochondria eyonakalisiweyo. Oku kukwaqinisekisa ukuphinda kusetyenziswe imitochondria ukuze isebenze kakuhle. I-Mitochondria ihlala yonakala kunye nobudala kwaye ngenxa yoxinzelelo. Ukukhupha i-mitochondria eyonakalisiweyo idlala indima ekwandiseni ixesha lokuphila.
Kuphononongo lweentshulube, urolithin Isongezelelo esilawulwa kwi-50 µM ukusuka kwinqanaba leqanda de kwaba sekufeni kufunyanwe ukuba bandise ixesha labo lobomi ngama-45.4%.
Kwesinye isifundo esenziwe ngo-2019 kusetyenziswa i-senescent human fibroblasts, i-urolithin A supplement yafunyanwa ukubonisa amandla okuguga. Iyakwazi ukonyusa uhlobo lwe-1 collagen expression kunye nokunciphisa ukubonakaliswa kwe-matrix metalloproteinase 1.
Isifundo esincinci esincinci somntu sibonisa ukuba i-UA yayikwazi ukuphucula ukusebenza kwe-mitochondrial kunye nethambo kwimpilo yabantu abadala xa ilawulwa ngomlomo kwi-500-1000mg kwisithuba seeveki ezine.
(2) Nceda ukukhusela umhlaza wedlala lobudoda
Ii-urolithins kunye nomanduleli wazo, i-ellagitannins, zinepropathi ezichasene nomhlaza. Bayakwazi ukuthintela ukwanda komhlaza weseli ngokubanjwa komjikelo weseli kunye nokuphembelela i-apoptosis. I-Apoptosis ibhekisa ekufeni kwesicwangcisiweyo apho umzimba uphelisa umhlaza-kunye neeseli ezosulelekileyo.
Kuphononongo lweempuku zifakwe kwiiseli zomhlaza zomntu, ii-ellagitannins metabolites (i-Urolithin A) zifunyenwe zithintela ukukhula komhlaza webele. Uphononongo luye lwaxela ukugcwala okuphezulu kweetabolites kwi-gland ye-Prostate, colon kunye nethambo lesisu.
(3) Ukuphuculwa kwengqondo
I-Urolithin A iyakwazi ukukhusela i-neurons ekufeni kwaye inokubangela neurogeneis ngokusebenzisa ukuchasana nokuvuvukala.
Kuphononongo lweempuku kunye nokukhubazeka kwememori, i-urolithin A yafunyanwa ukulungiswa kokukhubazeka kwengqondo kunye nokukhusela i-neurons kwi-apoptosis. Oku kucebisa ukuba iAA ingasetyenziswa kunyango lwesifo iAlzheimer's (AD).
(4) Ukubakho kokutyeba kakhulu
Uphando lubonisa ukuba i-ellagitannins iyakwazi ukuthintela ukuqokelelwa kwe-lipid kunye neziphawuli ze-adipogenic ezinje ngeprotein yokuphendula ukukhula 2 kunye ne-protein yokuqinisa ukubopha ngomjikelezo weseli.
I-Urolithin A ifunyenwe ngokuthe ngqo ukuphucula uvakalelo lwe-insulin ke ngoko kuthintela ukukhula koxinzelelo.
Kuphononongo lweempuku ezineengxaki zokutyeba kakhulu, i-urolithin Isongezelelo safunyanwa ukukhusela ukutyeba okubangelwa kukutya kakhulu kunye nokuchaphazeleka kwe-metabolic kumagundane. Uphononongo lubonise ukuba unyango lwe-UA lwenyusa inkcitho yamandla ngenxa yoko ubunzima bomzimba obuphantsi.